कांग्रेस, कमिनिस्ट र केमिस्ट्री- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कांग्रेस, कमिनिस्ट र केमिस्ट्री
अहिले कांग्रेस–कमिनिस्ट केमिस्ट्री देशको राजनीतिकमात्र होइन, जगत हेर्ने दृष्टि भएको छ । चीन र भारतसँग गरिने सम्बन्धमा कांग्रेस–कमिनिस्ट केमिस्ट्रीले काम गर्छ । यो केमिस्ट्री केही साझा शब्दावलीमा भेटिन्छ । ती हुन्, समाजवाद र लोकतन्त्र ।
जेष्ठ ५, २०७५ अभि सुवेदी
काठमाडौँ — एउटा छलफलमा भाग लिएको थिएँ, केही समय पहिले । दुई दलले ढपक्कै ढाकेको नेपाली राजनीतिलाई म एक साहित्यकार, साहित्य सिद्धान्तमा चाख राख्ने अनि यी कुनै दलमा नजोडिएको मानिसले कसरी हेर्छु भन्ने प्रश्न आउँदा म राम्ररी झस्केंँ ।
मलाई मनपर्ने दुईजना विश्व प्रसिद्ध पश्चिमी वाम विचारका सिद्धान्तवादी र व्याख्याता केम्ब्रिजका रेमन्ड विलियम्स र अमेरिकाका फ्रेडरिक जेमिसनलाई जोडेंँ मैले, अनि यताका मानिसका पनि कुरा राखेर इतिहासको चित्र खिच्ने प्रयत्न गरेंँ । मलाई थाहा छ, नेपालमा जनताका इतिहास ज्यादै थोरै छन् । त्यो इतिहास साधारण गाउँले वा बजारमा बस्ने कविहरूले रचेका साधारण कविता, सवाइ अथवा गीत र लोकवार्ताबाट खोज्नुपर्छ । म सानै छँदा कांग्रेस र कमिनिस्टको कविता मेरा एक दाइ कवि पहलमान सुवेदीले रचेर सुनाएको अहिले पनि कण्ठै आउने हुनाले त्यसलाई लिएँ, अनि विचार प्रस्तुत गरेंँ । यो छोटो आलेख लगभग त्यही प्रस्तुति हो । मलाई थाहा भयो, कांग्रेस र कमिनिस्टले बनिएको नेपालको आधुनिक इतिहासबारे हामीले खासै यताबाट सोचेका रहेनछौं । अहिले खोज्दा धेरै कुरा भेटिन्छन् ।
नेपालको राजनीतिकमात्र होइन, झन्डै चेतनाकै कलेवर कांग्रेस र कमिनिस्ट अनि तिनको केमिस्ट्रीले बनिएको रहेछ भनेर थाहा पाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन रहेछ, बुझ्दैछौं । तर त्यसको इतिहासभित्रको सन्दर्भले आधुनिक नेपालको इतिहासमा के अर्थ राख्छ, खुट्याएका रहेनछौं । आश्चर्य के छ भने यो केमिस्ट्री अनुभव गरिआएको अनि यो केमिस्ट्रीलाई जीवन र जगत हेर्ने दृष्टि बनाएको कुरा लिएर लेखिएका ग्रन्थ र आलेखहरू त्यति पढ्न पाइंँदैनन् । यही क्रममा खोजी गर्दा मैले अनुभव गरेको हुँ । यो केमिस्ट्री भनेको मेरोनिम्ति रेमन्ड विलियम्सले वर्गीकरण गरेको प्रतीकात्मक संस्कृति हो, अनि उनले नै भनेको भौतिक संस्कृति पनि हो ।
अहिले सिधै धन र पुँजीले अमूक सिद्धान्त र आचरणलाई सिधै खाइदिएको अवस्था हो । अथवा नेपालको कांग्रेस र कमिनिस्टसँग जोडिएको संस्कृति भौतिक हो र प्रतीकात्मक पनि हो । अर्का विचारक जेमिसन इतिहासलाई पनि मानिसको मनसँग जोड्छन् । इतिहासको राजनीतिक अवचेतन मन हुन्छ । नेपालको इतिहासमा कांग्रेस र कमिनिस्टको केमिस्ट्रीले बनेको अवचेतन सबैभन्दा बलियो भएर बसेको छ । जेमिसन इतिहासलाई हेर्दा पाठहरू, वर्णनहरू अनि तिनका कथालाई हेर्नुपर्छ भन्ने मान्छन् । इतिहासको राजनीतिक अवचेतना त्यसैमा देखिन्छ, ती भन्छन् । जटिल जस्तो लागे पनि कुरा सजिलो छ । आधुनिक नेपालको इतिहास हेर्ने कोणहरू अनेकौं हुन्छन्, तर कांग्रेस र कमिनिस्टको केमिस्ट्रीलाई हेर्दा अर्को कोण खुल्छ । साधारण उदाहरण छन् ।
बालक वयदेखि मैले कांग्रेस र कमिनिस्टको सहउच्चारण सुनेर आएको हुँ । म सानै छँदा कवि पहलमान सुवेदीले रचेको कवितामा कांग्रेस र कमिनिस्टकै नाम थियो । तिनले भनेको कुरा गाउँका शिक्षा प्राप्त नगरेका मानिसको बोली र विश्लेषण थियो । तर अहिले तिनले रचेको कविता एउटा महत्त्वपूर्ण शव्दको ‘आर्काइभ’ भएको छ । मैले दाजुले र अरूले भनेका श्लोकहरू टिपेर बँचाएका केही पाठहरू सम्झेको हुँ । यस्ता गाउँले कविहरूका रचना र अरू केही पाठ भए संकलन गरेर राख्नु अति आवश्यक छ ।
म लेख छोटो भएकोले कवि पहलमानले म बालकै हुँदा रचेर सुनाउँदै हिंँडेका केही श्लोकहरू यहाँ राख्छु । यी श्लोकबाट नेपालको आधुनिक वा सात सालदेखि यताको इतिहासमा कांग्रेस र कमिनिस्टको केमिस्ट्री कसरी गाउँ–गाउँसम्म पुगेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । यो सात वा आठ सालतिर रचेको पहलमानको कवितामा उनले विश्वेश्वर र मातृकाको रूपकजन्य चित्रण गरेका छन् । राणा ‘नृप’हरूका विशाल तोप पनि तोडेर कसरी विश्वेश्वर कोइराला निस्के अनि पछि कांग्रेस कसरी फँस्यो भन्ने वर्णन गरेका छन्, पहलमानले । ती भन्छन्, कमिनिस्ट भनेको मोहिनी रूप हो, जसको आकर्षणमा भुङ्ग्रिएर कांग्रेस युवा सकिन्छ । उनले भनेको यो साधारण बुझाइको कुरा आज आएर पाठ गर्दा त्यसमा हास्य रस निस्किन्छ, तर त्यो कविताले दुई कुरा देखाउँछ । पहिलो, नेपालमा कांग्रेस र कमिनिस्ट केमिस्ट्री पुरानो हो र दोस्रो, यो केमिस्ट्री नेपाली साधारण ग्रामीण समाजसम्म व्याप्त थियो । कविताका केही हरफ यस्ता छन् :
‘विश्वेश्वररूपी साउँ अक्षर भयो, मात्रारूपी मात्रिका/ पार्छन् खलबल राजधानी नृपको ब्राह्मण यी हुन् पात्रिका/.....पहिले जन्म हुँदै ठूला नृपकुमार मोहन शमशेरजी ता/ जसको जन्म दिने अगम् नृप ठूला श्री चन्द्र शमशेर पिता/ बन्दुक पर्वत, तोप पर्वत, ठूला संगीन पर्वत भए/ यी पर्वतहरू तोडी एक शूरमुनि विश्वेश्वरै वीर गए/ बन्दुक पर्वत, तोप पर्वत ठूला थिए हुकुम पर्वत/ यो पर्वतकन तोड्नलाई सजिलै कसको थियो वर्गत/ कांग्रेसमतकन हुर्कियो यदि भने यो बांँध्छ भारी अइन्/ हाने तापनि बज्रले समयमा पार्दिन्छ बज्रै मइन्/ आयु छैन परन्तुसम्म यसको देखिन्छ मृत्यु छिटो/... प्राक्तन् फेर सुरु गर्छ कर्म अघिको खुप् लाग्छ, त्यो काममा/ हाँस्तै मोहिनी आउंँछिन् युवकका सामु अंगाडिमहां/ कांग्रेसै रूपी हो, अनि पछि तहांँ कम्निष्ट रूप मोहिनी/ एकदिन मोहिनीका परेर बसमा भुङ्ग्रिन्छ कांग्रेस पनि ।’
यो एक नेपालका किसान सवाल्टर्न कविको सात–आठ सालतिरको कांग्रेस–कमिनिस्टको सहयात्रा, सहइतिहास र सहकर्मको वर्णनमा आजको इतिहास पनि प्रतिध्वनित हुन्छ । कांग्रेस नेताहरूले अहिले मिटिङहरूमा तीन घन्टा लामा ‘फिलिबस्टर’ वा केही कुरा नभनेका भाषणले इतिहासले दिएको एउटा बलियो चुनौती बुझाउंँछ ।
तर त्यो दलको सामथ्र्य विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विचार र दर्शन हो, जसलाई बुझ्नुपर्ने कांग्रेसको निम्ति ठूलै चुनौती हो । विश्वेश्वरको साहित्यका पात्रहरूले सूक्ष्म रूपले खोजेको मुक्ति वा स्वतन्त्रताको अर्थ नखुट्याई, उनले भनेको मेलमिलापको अर्थ केवल राजासँग वार्ता गर्नेमात्र बुझेर पछि कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी छापामारसंँग गरेका सम्झौता र कांग्रेसले कोल्टो फेरेको राजनीतिलाई त्यही दर्शनको रूपान्तरण हो भन्ने नखुट्याई, सहज कुरा गरिबस्नु कांग्रेसको अस्तित्ववादी समस्या हो । अर्कोतिर कमिनिस्टले नेपालको इतिहासलाई अत्यन्तै उथल–पुथल गरेर खेलेका हुन् । ती क्रान्तिकारी भए, संसदवादी भए, कति राजावादी भए, कति संसारमै नाम कमाएका बलिया छापामार भए, हतियार लिए, बिसाए अनि भने, तरेको पुल भत्कियो, जाने ठाउँ छैन । फेरि भने, अब मिल्ने बेला भयो । यसरी नेपाल कमिनिस्ट पार्टी नाम फेरि इतिहासबाट झिकेर एमाले र माओवादी नामधारी ठूला कमिनिस्ट दलहरू एक भए । चिन्हहरू, वा ‘आइकनोग्राफी’का आकारमा सम्झौता भए ।
यो पाठ पढ्ने जसले पनि भोगेको र जानेको कुरा हो, यो केमिस्ट्री । उमेर फरक हुन्छन्, झन् राम्रो । हामीले राजनीतिमा कांग्रेस र कमिनिस्ट भनेर चिनिन चाह्यौं । हामी साहित्यकार कि कांग्रेस कि कमिनिस्ट भनेर लेख्न मनपराउने धेरै भयौं । पञ्चायतको ३० वर्षे एकतन्त्री शासन पद्धतिमा कांग्रेस र कमिनिस्टको कुरा नै उच्चारण भइरह्यो । विद्यार्थी संघहरू कांग्रेस र कमिनिस्टकै नाममा खुले र चुनाव लडे । हामी सत्र सालपछि कलेजतिर पसेका विद्यार्थी कांग्रेस र कमिनिस्ट नै भयौं । झन्डै ज्यानै गुमाउनुपरेका कथा छन् । अन्त लेखेकै छौं । गायकहरू कांग्रेस र कमिनिस्ट भए ।
चित्रकारहरू कांग्रेस र कमिनिस्ट भए । साहित्यिक पत्रिका चलाउनेहरू कांग्रेस र कमिनिस्ट भए । डाक्टरहरू कांग्रेस र कमिनिस्ट भए । पछि पञ्चायतको दबदबा भएको बेला प्राध्यापकहरू कांग्रेस र कमिनिस्ट हुन छोडेनन् । बत्तीस सालमा बीसी मल्ल कांग्रेस पक्षका प्राध्यापक संघका अध्यक्ष भए । बीचमा पञ्चायतले बोली दबाइदियो । सम्वत् २०४३ सालमा डीपी भण्डारी साहसपूर्वक प्रजातान्त्रिक समूहका प्राध्यापक समूहबाट अध्यक्ष भए ।
पटक–पटक कमिनिस्ट समूहका पनि प्राध्यापक संघ भए । छ्यालीस सालपछि यो द्वैत धर्म, यो कांग्रेस र कमिनिस्ट हुने चलन सहज रूपले यान्त्रिक भयो । कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, अनि अदालतका मानिस कांग्रेस र कमिनिस्ट दलका भए । वलिकलहरूको बार एसोसियसन कांग्रेस र कमिनिस्ट भयो । पत्रकारहरू कांग्रेस र कमिनिस्ट भए । पछि गएर, अहिले पनि हालत त्यही छ, कांग्रेस र कमिनिस्ट हुने होड भयानक चलेको अवस्था हो । साना दलका पनि केही संगठन भए, तर कांग्रेस र कमिनिस्टको द्वैतशक्ति यति बलियो भयो र छ कि साना दलहरू त्यो हिसाब–किताब, त्यो इतिहासको ‘एल्गोरिद्म’भित्र पस्नै सकेनन् । अहिले पनि समस्या छ, तिनलाई ।
अहिले कांग्रेस–कमिनिस्ट केमिस्ट्री देशको राजनीतिकमात्र होइन, जगत हेर्ने दृष्टि भएको छ । चीन र भारतसँग गरिने सम्बन्धमा कांग्रेस–कमिनिस्ट केमिस्ट्रीले काम गर्छ । यो केमिस्ट्री केही साझा शब्दावलीमा भेटिन्छ । ती हुन्, समाजवाद र लोकतन्त्र । आचरणमा, धन र भागबन्डा मोहमा साम्य देखिनुमा पुंँजीको युग देखिन्छ । अहिले एकअर्कालाई यी दुई राजनीतिक शक्तिले जेजसरी प्रस्तुत गरे पनि नेपाली आधुनिक इतिहासको यो केमिस्ट्री नबुझी अर्थ लाग्दैन । भविष्य हेर्नुछ।
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७५ ०७:५४
प्रेस, भ्रमण र लथालिङ्ग
बीपी यो भूभागकै विख्यात राजनीतिज्ञ र संसद्मा दुई तिहाइको बहुमत ल्याएका नेता भए पनि गणतन्त्र नेपालका बलिया प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको जस्तो उनको अवस्था थिएन । उनका पछाडि राजा महेन्द्रका आँखा थिए ।
वैशाख २२, २०७५ अभि सुवेदी
काठमाडौँ — यसपालिको प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अथवा मे ३ मा मलाई एउटा छलफलमा सोधेको प्रश्न थियो, ‘नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा के कुरा बढी टडकारोसँग देखिन्छ ?’ मैले भनें, सरकार र राम्रो स्वतन्त्र मिडियाको बीचमा छुुट्टिने रेखाहरू हुन्छन् । तर नेपालमा अहिले केही समयदेखि यता मन्त्रीहरूले खोलेका गुह्य कुरा र प्रेसले खोलेका कुराहरू छुट्याउने रेखा टडकारो छैन ।
मन्त्रीहरू सुरक्षादेखि, कालोबजार, कार्टेलतन्त्र, धाँधली, ठेक्कामा निर्माण गर्नेका ज्यादती, शिक्षामा बद्मासी सबै कुरामा मिडियाले जस्तै खोलिरहेका हुन्छन् । अखबार पढ्दा र टेलिभिजन हेर्दा अनि मन्त्रीका भाषण सुन्दा कुरा मिलेपछि शक्ति र मिडिया बीचको रेखा धुमिल हुने कुरा आउँछ । तर त्यहींनेर स्वतन्त्रताको मूल्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ । म ओलीको सरकार वामपन्थीहरूको अधिक बहुमतको भएकोले यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्छ भन्ने तर्क मान्दिन । गणतान्त्रिक नेपालका कुनै दलका सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न सक्तैनन् र गर्ने छैनन् । तर त्यसका सूक्ष्म पक्षबारे मिडिया जागरुक हुनुपर्छ । म जोन लोइड नामका ब्रिटेनका विख्यात पत्रकारका तर्क मनपराउने मान्छे । उनले ‘हाम्रो राजनीतिमा मिडियाले के गर्दैछन् ?’ (२००४) भन्ने किताबमा भन्छन्, सरकार र राजनीतिज्ञहरूले अहिलेसम्म गरेभन्दा धेरै छलफल गरिरहनुपर्छ, किनकि तिनले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । मिडियाले आफ्नै मूल्यमाथि आस्था राखेर ती सबै कुरा आफ्ना श्रोता वा पाठकसमक्ष पुर्‍याउनुपर्छ ।
तर अहिले यो सानो आलेखमा म अरू एकाध कुराबारे लेख्न चाहन्छु । आजको नेपालमा चिन्तन, मिलन, विभाजन र समीक्षाका छलफल जोडदार चलिरहेको बेला ब्रोडसिट अखबारको पृष्ठभित्र केही अनुच्छेद लेख्ने मैले, कुनै सिद्धान्त, शास्त्र र विचारकहरूका कुरा सम्झेर केही भन्न सकुँला जस्तो लागेन । तर अर्थनीति र राजनीतिका केही तिखा विश्लेषण गर्ने लेखकहरूका आलेख यिनै अखबारहरूमा पढेर अनेकौं कुरा बुझ्ने गरेको मेरो बानी भने लुकाउन चाहन्न । मलाई अमूक सिद्धान्तका कुरा राखेर लेख लेख्न मन लाग्दैन । अहिले नेपालमा राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तलाई एकाध चित्र, विम्ब, विदेशी नेताका फोटा र नारामा हेर्न बढी सजिलो मान्न थालेका छन् । खासै विचारका गहकिला कुरा र सिद्धान्तका चर्चा तिनीहरू गर्न मनपराउँदैनन् । मलाई साना घटना र सम्झनाका इतिहासका टुक्राले निकै कुरा भन्छन्, आजकाल । म नेपालमा आउने विदेशी सरकार प्रमुखहरू अनि नेपालबाट पनि बाहिर जानेहरूले उठाउने साना देखिने परिघटना र ‘लजिस्टिकस’का विषयलाई लिएर यो देशको भौगोलिक अवस्थितिबारे केही कुरा निबन्धको शैलीमा लेख्ने जमर्को गर्छु ।
नेपालमा विदेशी राष्ट्रका उच्च पदाधिकारी वा नेता आउँदा ठूलो हलचल हुन्छ । सबभन्दा बढी हलचल देखिने सडकमा हो । गाडीहरूको जाम हो । सिठीका हर्हर्, गाडीका हर्न अनि साइरेनका आवाज हुन् । यस्तो हुन थालेपछि म भागेर अलिक एकान्तमा जान्छु । राष्ट्राध्यक्षहरू आउँदा होस् वा हाम्रै उच्च पदमा रहनेका छोटा बहिर्गमन हुन्, सबैको प्रहार खप्ने सडक हो । सडक एउटा थकित, च्यातिएको र थिल्थिलो पारिएको भूमिको कलेवर हो, काठमाडांैमा । त्यसमाथि क्रेनहरूले नित्य खोतलिएको, भविष्यमा भित्र पानी कुद्ने विशाल पाइप ओछ्याएर आधी पुरपार गरेर के गरौं, के गरौंको मुडमा अलमिलएको सहरको रामकहानी हो, काठमाडांै । मार्च ३, २००९ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजपाक्ष यहाँ आउँदाको भुक्तमानको सम्झना ताजै छ । ती बुद्धको जन्मभूमि कपिलवस्तुमा जानु अनि ती नफर्केसम्म हामीले यो कान्तिपुरी नगरीमा सास रोकेर बस्नु एउटा हास्यास्पद संकटको दरिद्र रचना थियो ।
त्यसो त विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरू पहिला पनि नआएका होइनन् । जानेका पनि कहानी छन् । ती शक्ति र राजनीतिसँग जोडिएका छन् । बीपी कोइरालालाई जेल हालेपछि राजा महेन्द्रले ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथलाई २०१८ सालमा निमन्त्रणा गरेको बेला, डेस्मन्ड डोइको वर्णन अनुसार, एकदिन सिंहदरबारमा भव्य भोज गराएको, अनि कांग्रेसहरूले विद्रोह गर्ने सम्भावना भएकोले सिकार खेल्न लगेर बाहिर–बाहिरै पारेर काठमाडांैमा ल्याएर स्वाट्टै उडाएको कुरा मैले दरबारकै त्यो बेलाका एक प्रतिष्ठित कर्मचारीबाट रमाइलो भाष्यमा सुनेको थिएँ । सम्वत् २०३१ सालमा युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसेफ ब्रज टिटो काठमाडांैमा आउने तयारी गरेको बेलासम्म काठमाडांैको सक्कली अनुहार देखिन्थ्यो । नैसर्गिक बाटा देखिन्थे । त्यो बेला काठमाडौंका सडक र कुनाकानीमा खुला पिसाब फेर्ने चलन थियो । अहिले पनि छ होला, गाडी र भिडमभिडले गर्दा सायद अहिले देखिँंदैन । टिटो आउँदा तयारी समितिहरूको पहिलो सुरक्षाजस्तै एउटा समस्या थियो ।
सडक र कुनाकानीका यी मूत्र गौंडीहरूलाई के गर्ने ? उनीहरूले एउटा उपाय निकाले । ती ठाउँ पहिला बढारे अनि त्यहाँ सेतै चुना छरिदिए । पिसाब फेर्ने यी ठाउँहरू उस्तै थिए, तर ती चुनाले छोपिएका अनौठा आकारमा घाममा पल्टेर गन्हाउँथे ।
नेपालमा भारत र चीनका नेता आउने विषय दिनदिनै महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ । नेपालमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी आउँदैछन् । तिनको यात्रा उध्र्वगतिको हुनेछ, ‘भर्टिकल’ । पटनाबाट हेलिकप्टरमा जनकपुर आएर, काठमाडौं प्रवेश गर्दै ती मुक्तिनाथ जानेछन् । यो यात्राको ‘जियोकल्चरल’ अर्थ वाचाल छ । यो यस्तो यात्रा उनले रोजेका छन्, जुन अरू कुनै देशका सरकार प्रमुखले गर्न सक्तैनन् र गरेका पनि छैनन् । चीनका सरकार प्रमुख वा राष्ट्रपतिको यात्राले नाप्ने ‘जियोकल्चरल’ यात्रा खासै एउटा नक्सालाई धर्मले रञ्जित गरेर बनिने छैन । तर कुरा अलिक अर्को पनि छ । अहिले नेपालमा दुई छिमेकी देशका नेता र प्रमुखहरू आउने कुरा भूराजनीति भएको छ, भूसंस्कृति मात्र होइन । नेपालका सरकार प्रमुखले भारत र चीन भ्रमणमा जानु, पहिला कुनमा जानु अनि गएर नेपालको निम्ति के लिएर आउनु, मुख्य कुरा भएका छन् । यी भ्रमणमा नेपालको राजनीतिको मात्र होइन, कूटनीतिको अर्थ पनि गहिरोसँग जोडिएको कुरा साधारण ज्ञानको विषय भैसक्यो ।
नेपालबाट यी दुई छिमेकी देशका भ्रमण गर्ने सरकार प्रमुखले दुवै देशमा सरक्क गएर आउने औपचारिकता मात्र नगरी केही ओज, अनि त्यहाँका राजनेता र सरकार प्रमुखहरूलाई तिनको मिसन र तिनको धारणाबारे केही कुरामा सोच्न लगाउने गरेका उदाहरण धेरै छैनन् । सन् १९६० मा बीपी कोइराला पहिला भारत गए, अनि पछि चीन गए । उनको माओसँग भएको भेटघाटबारे लेखिसकियो । बीपीलाई भारतका नेताहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिन्थे, सधैं लिए ।
बीपीपछि दुई छिमेकी देशका भ्रमण गरेर उनका कुरालाई ध्यान दिन मनोगत रूपले लगाउने सरकार प्रमुख केपी ओली नै हुन् वा हुन सक्छन् भन्ने देखिएको छ । यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो । बीपी यो भूभागकै विख्यात राजनीतिज्ञ र संसदमा दुई तिहाइको बहुमत ल्याएका नेता भए पनि गणतन्त्र नेपालका बलिया प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको जस्तो उनको अवस्था थिएन । उनका पछाडि राजा महेन्द्रका आँखा थिए । भारतको भ्रमणमा जानु अघि १९६० को अमूक महिनाको राजा महेन्द्रको सवारी क्याम्पमा उनलाई भेट्न बीपी कोइराला गए । मलाई बीपीका सचिव लेखक केशवराज पिंडालीले भने अनुसार त्यो रात महेन्द्रले एउटा पार्टी दिए, क्याम्पमा । ‘महँंगा पेय पदार्थ’को पनि निकै प्रयोग भएको थियो । बीपीलाई सम्बोधन गरेर राजा महेन्द्रले यस्तो कविता लेखेर सुनाए, त्यो रात । कविताको रूपमा यो केही छैन, तर यसबाट महेन्द्रमा एउटा बीपीप्रति प्रतिद्वन्द्विता र इष्र्याको भावना थियो भन्ने बुझिन्छ ।
कविता यस्तो थियो :
‘बीपी, अब तिमी हामीलाई छोडेर जान्छौ/ तिमी ठूला–ठूला सहरमा विदेशमा घुम्न जान्छौ/ रमाइलो तिमीलाई होला/ हामीहरू त यही नदी, कन्दरा र चौतारीमा सुस्ताउँला/ र तिमीलाई सम्झौंला/ हामीहरूलाई नबिर्सिनु/ र हामीहरू त तिमीलाई बिर्सन सक्तैनौं । जब थाकेर चौतारीमा पसिना पुछौंला/ त्यस बखतमा म तिमीलाई सम्झुँला ।’
कविताको अन्तिम हरफमा उनले ‘म तिमीलाई सम्झुँला’ भनेर राखेको अभिव्यक्ति अनौठो र अर्थपूर्ण छ । नेपालका सरकार प्रमुखहरूले नेपालका यी दुई छिमेकी देशहरूको भ्रमण गर्दा आफ्नो यहाँ शक्तिको पकड र अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा बीपीको घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यो एउटा इतिहासको उच्चारण नगरिएको पातो हो । तर अहिलेको बद्लिंँदो परिस्थितिमा भारत र चीनका सरकार प्रमुखका भ्रमणहरू यहाँको कूटनीतिभन्दा पनि उतै निर्धारण हुने कूटनीतिका कारणले हुँदै जाने कुरा बढ्दै जानेछ । यो नेपालको नयाँ भूराजनीतिको परिस्थिति हो । यस्तो अवस्थामा नेपालको यी देशमा भ्रमण गर्ने सरकार प्रमुखको मिसन, व्यक्तित्व र नेपालको महत्त्व देखाउन सक्ने सामथ्र्यको ठूलो अर्थ हुनेछ ।
अन्त्यमा, एउटा घटनाको स्मरण गर्छु । सन् १९७० को हिउँद महिनामा म टेकु अस्पतालमा बिमारी भएर बसेको बेला राति ल्याएको एक भीमकाय बिमारी भन्दै थियो, ‘यो शरीर सबै लथालिङ्ग छ, डाक्टर हो, मुख्य–मुख्य जाँच ।’ ती मानिस मेरा प्रिय दाइ रूपचन्द विष्ट थिए, यत्ति सम्झिन्छु यहाँ । अहिले यो देश रूपचन्द दाइले भनेको शरीरजस्तो लथालिङ्ग भएको छ । सबैलाई चेतना भया ।
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७५ ०८:०८
सडक दुर्घटना कसरी कम गर्ने ?
अपरिचित रहँदाका अनुभूति
बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा 'जोकर’ नबनाऔँ
रेबेका स्कार्ग हेर्सवर्ग, ड्यानियल टी विलिङहाम
डा. हीराकाजी मानन्धर, सुभद्रा मानन्धर
स्वतन्त्र मन नेपालको धन
अभि सुवेदी भाद्र २१, २०७६
‘हरियो वन नेपालको धन’ अब धेरै समयसम्म नरहला । भर्खरै एउटा रोमकुप तरङ्गित गर्ने मारिस्सा कुपरको लेख ‘रुखले काठमाडौंलाई बचाउला, तर के काठमाडौंले रुख बचाउला ?’ काठमाडौं...
बाबुराम गुरुङ भाद्र २१, २०७६
बढ्दो सवारी साधन सँगसँगै संसारभरि नै अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । हाल नेपालमा १...
अजय दीक्षित भाद्र २१, २०७६
नयाँ स्थानमा बस्दाको एउटा फाइदा अपरिचित रहन पाउनु रहेछ । कसैले चिन्दैनन् । स्कुलको जीवनपछि पहिलोपल्ट ‘हाफ प्यान्ट’ लगाएर मर्निङवाकमा निस्कन थालेको छु, नयाँदिल्ली छेउको सहरमा । पानी...
रेबेका स्कार्ग हेर्सवर्ग भाद्र २१, २०७६
जब दुईवर्षे बच्चा कुनै सामान्य विषयलाई लिएर रुन्छ, तब अभिभावकले के गर्नुपर्छ ? प्रायः सबैको मनमा आउने पहिलो कुरा– ‘फोटो खिच्ने, रमाइलो क्याप्सन राख्ने र इन्स्टा...
वीणा झा भाद्र २१, २०७६
महत्त्वपूर्ण पदमा बसेकाहरू प्रायःजसो शब्द चयन र संवाद शैलीप्रति त्यति संवेदनशील भएको देखिँदैन । तिनीहरू बारम्बार विवादमा आउने बिभिन्न कारणमध्ये शब्द चयन र संवाद शैली पनि...